အောက်စီဂျင်စက်ရုံတည်ဆောက်ရန်နှင့်၀ယ်ယူရန်အတွက် အလှူငွေသိန်း (၅၀၀) လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ် – Maythadin
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ Smile ကတော့မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမကစိတ်ရင်းသဘောထားအလွန်ပြည့်ဝတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
သူတို့မိသားစုလေးကအလှူအတန်းရက်ရောလွန်းကြတဲ့သူတွေပါ။ စမိုင်းလ်ကယခုလိုချမ်းသာကြွယ်ဝလာဖို့အတွက်အခက်အခဲကိုကျော်ဖြတ်လာရတဲ့သူ ဆိုတော့သူမကမရှိဆင်းရဲသားတွေအပေါ်မှာကိုယ်ချင်းစာတရားရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ.
စမိုင်းလ် ကအခုဆိုချောမောလှပတဲ့သမီးနှစ်ယောက်လဲရှိနေပါပြီ။ သမီးကြီးနဲ့အတူမော်ဒယ်ဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်နေပါပြီ။
သမီးနှစ်ယောက်ကလဲမိဘတွေရဲ့ စကားကိုအမြဲနားထောင်တဲ့သူတွေလို့သိရပါတယ်။သူတို့မိသားစုကမကြာခဏဆိုသလို အလှူဒါနတွေပြုနေကြတာပါ။ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေကိုလဲတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေးကမ်းလှူဒါန်းကြပါတယ်.
ယခုအချိန်မှာအလိုအပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အောက်စီဂျင်တွေအတွက် အလှူငွေသိန်း (၅၀၀)ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ် မွန်မြတ်တဲ့အလှူလေးပါ။
သူမရဲ့အလှူလေးကိုလဲလူမှု့စာမျက်နှာမှာမျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ” အခုချိန်မှာအလိုအပ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အောက်စီဂျင်ဝယ်ရန်အလှူငွေ သိန်း ၄၀၀နှင့်အောက်စီဂျင်စက်ရုံဆောက်လုပ်ရန်အတွက်အလှူငွေသိန်း၁၀၀ပါဝင်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းထားပါတယ်။
ဤသို့လှူဒါန်းရသောကြောင့်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးဘေးမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေ ဆက်လက်ပြီးတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီးလှူဒါန်းသွားပါမယ်ရှင် ”ဟုဆိုပြီးအလှူဒါနကို မျှဝေရင်းပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင် ကပ်ဘေးမှလွတ်မြောက်အောင်လဲဆုတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။
ခ်စ္လွစြာေသာပရိတ္သတ္ႀကီးေရ Smileကေတာ့ေမာ္ဒယ္သ႐ုပ္ေဆာင္အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။သူမကစိတ္ရင္းသေဘာထားအလြန္ျပည့္ဝတဲ့သူတစ္ ေယာက္ပါ။
သူတို႔မိသားစုေလးကအလႉအတန္းရက္ေရာလြန္းၾကတဲ့သူေတြပါ။စမိုင္းလ္ကယခုလိုခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာဖို႔အတြက္ အခက္အခဲကိုေက်ာ္ျဖတ္လာရတဲ့သူဆိုေတာ့သူမကမရွိဆင္းရဲ သားေတြအေပၚမွာကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ.
ယခုအခ်ိန္မွာအလိုအပ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ေအာက္စီဂ်င္ေတြအတြက္ အလႉေငြသိန္း (၅၀၀)ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။တကယ္ မြန္ျမတ္တဲ့အလႉေလးပါ။
သူမရဲ႕အလႉ ေလးကိုလဲလူမႈ႕စာမ်က္ႏွာမွာမွ်ေဝထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ”အခုခ်ိန္မွာအလိုအပ္ဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ ေအာက္စီဂ်င္ဝယ္ရန္အလႉေငြ သိန္း ၄၀၀ ႏွင့္ေအာက္စီဂ်င္ စက္႐ုံ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္အလႉေငြသိန္း၁၀၀ပါဝင္ကုသိုလ္ျပဳလႉဒါန္းထားပါတယ္။
ဤသို႔လႉဒါန္းရေသာေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးေဘးမွအျမန္ဆုံးကင္းေဝးၾကပါေစဆက္လက္ၿပီးတတ္နိုင္သမွ်ႀကိဳးစားၿပီးလႉဒါန္းသြားပါမယ္ရွင္ ”ဟုဆိုၿပီးအလႉဒါနကို မွ်ေဝရင္းျပဳခဲ့တဲ့ကုသိုလ္ေၾကာင္ကပ္ေဘးမွလြတ္ေျမာက္ေအာင္လဲဆု ေတာင္းေပးထားပါေသးတယ္။